Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguReservations
Wamkelekile kwiHotele yeCastletroy Park, enye yeehotele zeenkwenkwezi ezine zeLimerick.
Ihotele iCastletroy Park ikufuphi nesixeko saseLimerick eCastletroy. Ihotele imi kufutshane nohola wendlela uM7 Dublin, omelene neDyunivesithi yaseLimerick kunye nemizuzu nje ukusuka kwiziko lezorhwebo laseLimericks. IHotele iCastletroy Park yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala undwendwela yonke into iLimerick enako ukuquka iimpawu zomhlaba ezifana neKing Johns Castle, iThomond Park kunye neMarike yobisi. Ibonelela ngeyona ndawo ibalaseleyo yokujonga i-Irelands Wild Atlantic Way okanye iindlela zokhenketho zaseMpuma zaMandulo.
I-Suite ene-1 King Size Bed okanye iibhedi ezi-2 eziSingle kunye nebhedi eyongezelelweyo eHideaway ngaphantsi ukwenzela undwendwe olongezelelweyo.
Ukuya kuthi ga kwi-3 abantu bangahlala apha kamnandi.
*IiSuites zibekwe kufutshane nehotele*
-Ikhitshi enezikhenkcezisi, iSinki, iMicrowave, iToaster, iTea & nezixhobo zokwenza ikofu.
-En suite ene Shower
-Smart TV kubandakanya ukufikelela kwiNetflix
-Isantya esiphezulu sokufikeleleka kweWifi
-Indawo yokusebenzela eyaneleyo yeendwendwe zamashishini
Zonke iindwendwe zeeSuites zethu eCastletroy Park zisenokonwabela izibonelelo zehotele ezifana nokusetyenziswa okuncomekayo kwazo zonke iindawo zolonwabo kunye nesidlo sakusasa kwindawo yokutyela yaseMcLaughlin.
Ihotele iCastletroy Park ikufuphi nesixeko saseLimerick eCastletroy. Ihotele imi kufutshane nohola wendlela uM7 Dublin, omelene neDyunivesithi yaseLimerick kunye nemizuzu nje ukusuka kwiziko lezorhwebo laseLimericks. IHotele iCastletroy Park yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala undwendwela yonke into iLimer…
Umbuki zindwendwe ngu- Reservations